मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा::Independent News Portal from Nepal.
एलिना १७ वर्षकी थिइन् । त्यतिवेला उनी पहाडी दुर्गम गाउँको स्कूलमा कक्षा दशमा पढ्दै थिइन् । गाउँले जीवनको सामान्य परिवारमा हुर्केकी उनी इमान्दार र सोझोपनकी केटीमा चिनिन्थिन् । दिदी दाजुहरुको मायामा हुर्केकी भएपनि दिदीहरुले घरजम गरेपछि र दाजुहरुले परदेशको बाटो लिएपछि डाँडामाथिका घाम जस्तो भएका बुढ्यौली आमा–बुबा सम्हाल्ने, घर ब्यावहार मिलाउने र खेती लगाउने जिम्मा उनकै काँधमा आएछ ।
अर्मपर्म र सरसापटकै भरमा भएपनि उनले आप्mनो जिम्मेवारीलाई सम्हाल्दै क्याम्पस लेभल सम्मको अध्यायन गर्न भ्याइन् । घरको दुखेसो सम्हाल्दै क्याम्पस अध्ययन गरेको २ वर्ष वितिसकेको के थियो छरछिमेकमा एलिनाको विवाहको चर्चा चल्न थालेको छ । घरले जा–जा र बनले आइज–आइज भन्ने बेलामा कतै राम्रो कुटुम्ब भेटिए लगनगाँठो कसिदिन पाए कर्म सकिने थियो भन्नेमा छन् उनका बुवा–आमा ।
धेरैतिरबाट विवाहको प्रस्ताव आउन थालेपछि उनको मनपनि दोधारे बन्न थालेको रहेछ । छटपटि बढेको छ, निध हराएको रहेछ उनको । दिनभरीको कामको थकानलाई शिरानी लगाउँदै परालको गुन्द्रीमा यताउता मडारिन्छिन्, कोल्टे फेर्छिन र सोच्छिन्– राम्रो घरानको केटा पाए त ठीकै हो, तर भनेजस्तो कहाँ मिल्ला र ? फेरि आमा बुबाको रेखदेख गर्ने पनि त कोही हुन्न । कैयौ रात मन डुलाउँदै पिरोलिन्छिन उनी ।
यसरी नै दिनहरु वित्तै गए । उनका बुवा आमाको पनि खटपट बढेको छ उसैगरी । हुर्केकी छोरीको हात कुटुम्बको हातमा सुम्पिदिन पाएदेखि मरिगइयो भनेपनि आत्माले शान्ति पाउने थियो, नत्र ‘बुढाबुढीको खटपटि बढेको र नीध हराएको राम्ररी बुभ्mने गरेकी छन् उनले । समय सन्दर्भमा धेरै केटाले ताकेका पनि छन् । कुरा चलाउने र प्रश्ताव राख्नेहरु लाई निर्णय दिन भने सकेकी छैनन् ।
एलिना दिदी ‘एलिना दिदी‘ छिमेकीको घरमा फोन आएपछि गाउँका साना नानीहरु एकै स्वरमा कराउँदै एलेनालाई शहरबाट फोन आएको खवर दिन पुग्छन् । एलिना किचनमा ब्यस्त छिन् । झमक्क साँझ परिसकेको छ । गाउँका केटाकेटीले एकै स्वरमा खवर पु¥याउछन्–एलिना दिदी शहरबाट तपाईंको फोन आ छ छिमेकमा झट्ट जानु रे ।
एलिना हँ कहाँबाट कसको फोन ? कुद्दै एलिना फोनतर्फ जान्छिन्, छिमेकी दाइले होल्डमा राखिदिएको फोन रिसिभ गर्छिन् । केहिबेर फोनमा कुरा गरिसकेपछि उनी दगुर्दै फर्किन्छिन् र आमालाई सुनाउँछिन्– ‘शहरबाट भाउजुले फोन गर्नु भएको थियो, मलाई हेर्न केटाको प्रस्ताव आएको थियो रे, भाउजुसँग कुरा गरेछ, मलाई शहराँ झिकाइएको छ, तर आमा मलाई पटक्कै जान मन छैन’ । एलिनाले आमासँग बेलिविस्तार लगाईन् । बेलुका खापिनन सकेपछि एलिनाका बा–आमाले सल्लाह गरे । लामो परामर्शपछि एलिनालाई एकपटक शहरकी भाउजुको घर पठाउने निधो भयो ।
एलिनाका घरबाट शहरकी भाउजुका घरसम्म पुग्न गाडीमा करिब २ दिनको यात्रा गर्नुपर्छ । शहरजाने चाँजोपाँजो मिलाउँदा केहीदिन ढिलो भयो । उताबाट तारन्तर भाउजुको फोन आईरहेको छ । छिमेकीसँग सरसापटल गरेर खर्च जुटाएर एलिना शहरतिर लागिन् । ३/४ पटक गाडी परिर्वतन गर्दामात्र उनी गन्तव्यमा पुग्थिन, गाउँले सोझी केटि भनेर उनको लवाज र बोलीचालीबाटै स्पष्ट खुल्थ्यो । सोझोपनको फाइदा उठाउँदै शहरका ठिटाहरुले एलिनालाई पछ्याइरहेका थिए ।
हलक्क बढेकी पहाडे केटी हेर्दै गालाबाट रगत चुहेला जस्ती झरझर देखेपछि केटाहरुको मन कागतीको रस देख्दाको जिब्रो जस्तै । तर विचरा ! सोझी एलिनालाई त्यो पत्तै भएन । उनले केटाहरुको नियतलाई बुझ्नै सकिनन् । एलिनालाई कहिले सुन्तला दिन्थे त कहिले बदाम, चना आदी दिएर नजिकको आफन्त झै गर्दै गए गाडीको यात्रामा ।
रात परिसकेको थियो । गाडी शहर प्रवेश गर्दै थियो तर एलिनाकी भाउजुको घर शहरको गाडी स्टेण्डबाट झण्डै २ कोष पर थियो । गाडी अन्तिम स्टेण्डमा पुगेर रोकियो । सबै यात्रुहरु उत्रिए, एलिनापनि उत्रिइन् । गन्तव्यसम्म पुग्नकोलागि एलिनाले रिक्सा प्रयोग गर्ने सोच बनाइन् । उनै शहरी केटाहरुले रिक्सा चढ्न सहयोग गरे झै गरे र एलिनाको अघि र पछि बसे, एलिनालाई चलाउन र धकेल्न थाले, तवमात्र बुझिन एलिनाले उनीहरुको नियत !
उनको जीउ काम्यो डर लागेर आयो । शहरको लोडसेडिङको बेला थियो, एकान्त अध्यारो ठाउँमा पुगेपछि रिक्सा रोक्न लगाए । रिक्सावाललाई केटाले हकारे उसको केहि लागेन, उसले सवैलाई त्यहिँ छोडिदियो र रिक्सा फर्कायो । केटाहरु चारजना थिए उनीहरुले एलिनालाई जबरजस्ति गर्न खोजे घम्साघम्सी प¥यो, एलिनाले कडा प्रतिरोध गरिन, चिच्याइन, कराइन्, गुहारिन्, केही समयमा अर्काे रिक्सा त्यही बाटो भएर आउदैथियो, त्यसमा तीनओटी केटीहरु रहेछन् । एलिनाको गुहार सुनेर केटिहरु आर्लिए, उनीहरलाई देखेपछि केटाहरु भागे ।
उनीहरुकै सहयोगमा एलिना शहरिया भाउजुको घर पुगिन् । भाउजुलाई सबै बेली विस्तार सुनाइन् तर भाउजुले समयमा हिड्नपर्छ नि भनेर उल्टै गाली गर्न थालेपछि एलिनाको मन कुडिया । एलिनालााई लागेको थियो भाउजुको सहाराले ती केटाहरुलाई केही खोज तलास होला र कार्वाही प्रक्रियामा जालान्, तर भाउजुले यसलाई सामान्य रुपमा लिईन्, सुनेको नसुनेई भईन् । उनलाई लाग्यो मानौ शहरको यो परिचय रहेछ ।
एलिनाको मन दुखेको थियो । फ्रेस हुन पाएकै थिइनन् भाउजुको सम्पर्कबाट भोलीपल्टै एलिनालाई हेर्ने केटा आयो । मन कुडिएको वेला आपूmलााई हेर्न आएको केटासँग दोहोरो संवाद गर्न नै सकिनन्, मात्र मुण्टो हल्लाइन् । मानौ सांकेतिक कुराकानी हुँदैछ । उनले सोच्ने र निर्णय गर्ने मौका पाएकै थिईनन् । उनलाई हेर्न आएको केटाले भाउजुसँगै एलिनालाई मन पराएको कुरा गरेपछि विवाहको कुरा सकेर फर्किएछ । एकहप्तापछि घुरनसँग एलिनाको विवाह हुने निश्चित भएछ । एलिनाका आँखा रसाइरहेका थिए । मन रोइरहेको थियो, त्यही बीचमा एलिनाको विवाह सम्पन्न भयो ।
एकसरो सामान जुटाएरै सामान्य तवरले विधिपूर्वक नै एलिनाको विवाह सम्पन्न भयो दुलाहाले बेहुली भित्रियाए । वेहुली भित्रियाएपछि दाइजोको विषयमा ठूलै खैलाबैला मच्चियो, वेहुलाकी आमाले दाइजो नपाएको झोंक देखाइन् । मनमा आएसम्म गाली गरे आफन्तसमेत मिलेर । वेहुलालाई पनि अप्ठ्यारो महशुस भयो । नन्द र आमाजुपनि धुरिए, धेरै सम्पत्तिको अपेक्षा गरेका रहेछन भन्ने प्रश्तुती छरपस्ट बनाए । गाली बेइजतिका सब्द प्रयोग गरेर पालोपालो बर्बराउन थाले । दाइजो नपाएकै कारण एलिना वेहुली भएकै दिन परिवारमा छी छी र दुरदुरको पात्र बनिन् । बेहुलाले परिवारलाई बुझाउन प्रयत्न गरे तर उनको केही जोर चलेन । दिदी–बहिनी र आमाले उनलाई भोकाएको बाजले चल्लो छोपे झै गर्दारहेछन् ।
एलिनालाई साथसहयोग मिल्नुको सट्टा उल्टै चोट थपियो । घुरनपनि पारिवारिक तनावमा परे । मन बहलाउन घुरन साथीहरुका तिर समय विताउँदथे । प्रायजसो खाना खान आउने समयमा घुरनका घरमा रडाको मच्चिने गर्दथ्यो, घटनाहरु दोहोरिन्थे ।
भित्रभित्रै घुरन कुडिइरहेका रहेछन्, विवाहको तेस्रो रात अवेरसम्म घुरन घर नआएपछि एलिनाले फोन गरिन् । पटक–पटक फोन काटिएपछि एलिना थप आशंकित भइन् । एलिनालाई झन् खटपट बढ्यो । उनले घुरनकी ममीलाई सोनिन्–किन अहिलेसम्म घुरन घरमा आएनन् ? सासुले मनिन्ः भरे आउछ होला‘ तन्नमकी छोरी तन्किँदै गर न‘ केही समयपछि घुरनकी ममीलाई घुरनका साथीको फोन आयो‘सबै हस्याङ र फस्याङ गर्दै आत्तिए झै गरे । घुरनले विष खाएको रहेछ । रुवाबासी चल्यो‘। घुरनलाई अस्पतालमा भेटिन एलिनाले । घुरनलाई हेर्नेहरुको भीड लागेको थियो । कुरा काट्नेहरु आ–आफ्ना भाषामा व्याख्या गरिरहेका थिए ।
घुरन विरामी बेडमा बेहोस थिए । एलिना घुरनलाई रगत दिन्छिन्, सुन्य समयमा भगवानसँग घुरनको जीवन रक्षाको प्राथना गर्दै तप तप खसेका आँशुका थोपाभित्र भविश्यको जीवन खोज्दै घुरनलाई बोलाइरहेकी थिइन् अचेत अनुहार सुम्सुम्याइरहेकी थिइन् । घुरन मृत्यु र जीवनको दोसाँधमा छटपटाइरहेका थिए ।
प्रकाशित मिति : मङ्लबार, जेष्ठ ८, २०७५ , १:२२ बजे
सिद्धार्थ साहित्य परिषद्द्धारा आज २३१ औँ संगम सम्पन्न